China Ọkpụkpụ Cob Bed Bulb Review China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọkpụkpụ Cob Bed Bulb Review - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọkpụkpụ Cob Bed Bulb Review)
40w Led Corn Bulb E26 E39 4800LM
Nnyocha Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Anyị bụ oke na-egbuke egbuke na 120lm / w akwa watt to lumen output ratio. Nke a 40w Led Corn Bulb E26 dochie ogwe aka 120W na-agbanyeghị aka ma chekwaa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. The Led Corn Bulb E39 enweghị radieshon, dịghị filika, ntabi-na re-na, edo ọkụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ...
Onu ogugu ugbua nke Led nke 9w bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 6w ọka Light Fitting bụ nkwụsị zuru okè maka oghere nke 18W incubescent. The 6w E27 Led Corn Cob enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ntụ ọka ọka wit nke e27 na-eduzi bụ Mercury-enweghị onwe ya, ọ dịghị flickr ma ọ bụ UV. Mkpụrụ ọka anyị...
Ọkpụkpụ Cob Bed Bulb Review Ọka Mkpụrụ Bulb Ọkpụkpụ sodium bọchie Ọka Cob Led Mogul Ọkụ Cob Light Fitit Ọka Kasị Ọkụ Cob Ọka Ọkụ Na-enwu Kasị Ọkụ Bulb Home Depot